»Ohere ndi Franchise»Pawpounders Franchise
Pawpounders bụ ụlọ nchekwa nwere “nchekwa ụzọ nkịta mmega” nke dị na 10 acres nke ime obodo niile na-akpaghị aka ka ị dee akwụkwọ na ntanetị, tinye site na usoro ntinye ọnụ ụzọ na-akpaghị aka, tinye ebe nchekwa, wee banye mpaghara edozi.
Ogugu ya nke oma, nke CCTV kpuchitere, uzo ya abanye n’ime ubi, efere mmiri, akuku mmiri na ulo. Ọ dịghị nkịta ndị ọzọ ọ bụ naanị maka gị na nkịta gị yabụ enweghị ihe ndọpụ uche na-ekwe ka onye nwe ya zuo ike otu oge ka ịga ogige dị na mpaghara na-eduga ma jupụta na mmadụ.
Nkịta na-eme mgbatị ahụ ugboro iri na asaa karịa ụzọ, Anyị na-enye ngwugwu zuru oke site na ịnweta ikike nhazi maka ntinye nke ngere, ntinye ọnụ ụzọ na-akpaghị aka, ngwanrọ maka ntinye akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ ya ka azụmahịa zuru oke maka gị.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere ohere ikike Pawpounders, gụnyere nkọwa ego, inweta ikike na nkọwa nke ihe gụnyere, biko pịa n'okpuru. Anyị ga-ezitere gị ozi mkpọsa aha anyị nke na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara azụmaahịa ụlọ ọhụụ gị.